Sunday March 17, 2019 - 11:29:51 in Wararka by
Wadooyinka xiran ee lagu arkayo Ciidamada kala duwan ee Dowlada ayaa waxaa ka mid ah wadada muhiimka ah ee Maka Almukrama wadooyinka Wadnaha ,Sodonka iyo qeybo ka mid ah wadada Warshadaha, waxayna ciidamada udiidayaan inay isticmaalan Gaadiidka dadweynaha.
Dadka shacabka ah ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa maalinkii labaad cagahooda maalaya,waxaana wadooyinka ku arkeysa iyaga oo lugeenaya, waxayna ku sheegayan inay aad ugu dhib qabaan isticmaalka wadooyinka marka ay wafood heer caalami ah ay soo gaaran Magaalada Muqdisho.
Wafdi ka socda Dowlada Jabuuti oo horkacayo Madxaweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ujeedkooduna uu yahay inay ka qeyb galaan daahfurka Safaarada Dowlada Jabuuti ay ku leedahay soomaaliya oo lagu wado in maanta ladaaah furo ayaa ku sugan maalinkii labaad Muqdisho,waxaana aad loo adkeeyaga amaanka goobta ay ka dhaceyso xaflada.
Xaflada daafurka Safaarada Jabuuti ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxda ugu sareysa Dowlada Soomaaliya oo ugu horeeyo Madaxawynha Jamhuuriyada Federaalaka Soomaaliya Mudanae Maxamed Cabduulaahi Farmaajo ,sidookale waxaa ka qeybgalaya Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud.
Sidookale Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa ka qeyb galaya kulan lagu daahfurayo Kalafadhiga 5aad ee Golaha Shacabka Soomaaliya.
Sikastaba ha ahaate marka ay wafood soogaaran Magaalada Muqdisho iyo marka ay madaxda Dowlada booqanayan xarumaha Dowlada ayaa aad loo adkeeyayaa amaanka, waxaana la xiraa inta badan wadooyinka muhiimka ah iyadoona arinkaasi ay shacabka ka mujiyaan cabasho xoogan.